Famerenana ny fandaharam-potoana: Inona no atao hoe fanala ao anaty tranokala?
Ny fanasitranana ny tranonkala dia dingana amin'ny fanangonana vaovao avy amin'ny tranonkala. Na izany aza, ny angon-drakitra dia angonina ho an'ny tanjona samihafa Ny robot tafahoatra dia manampy amin'ny famolavolana haingana kokoa ny fametrahana fampahalalana avy amin'ny tranonkala haingana kokoa sy marina kokoa. Noho izany, manala anao fotoana maro izay azo atao amin'ny hetsika hafa ny mpandrindra tranonkala.
Ohatra amin'ny fanoratana tranonkala
Ho ohatra ny fampiasana robots web tena ilaina, manaova ekipa varotra. Mba hahazoana fitarihana tsara, dia mety mila manao antso mangatsiaka izy ireo. Ahoana anefa no ahazoan'izy ireo ny isa azony hiantso azy? Tsara ny mikaroka ny lahatahiry iray hanonganana tarehimarika. Fantatrao ve hoe firy ora maromaro hividianana fotsiny ny nomeraon-telefaona maromaro misy mpanjifa marobe? Mety ho mandany fotoana sy mahakivy izany.
Eo amin'ny tranokala no misy azy io. Azonao atao ny mandamina azy io mba handraisanao fampahalalana sasantsasany avy amin'ny lisitra iray manokana ao amin'ny tranonkala. Afaka manangana robo dexi.io ianao mba hikaroka ny lisitry ny orinasam-panjakana voatanisa ary hanaisotra ny fifandraisana toy ny nomeraon-telefaona sy adiresy mailaka. Fampiasana tsotra fotsiny izany. Afaka ampiharina amin'ny asa fanangonam-baovao samihafa ny fananganana tranokala.
Ny tranonkala fampitahana vidin-tsolika ihany koa dia mampiasa ny robot web ho fanangonana ny vidin'ny vokatra isan-karazany toy ny finday smartphone, hotely, carte de crédit, ary fiantohana fotsiny mba hanononany vitsivitsy. Raha ny marina, misy tranonkala fampitahana sasany koa dia manakona ny angona avy amin'ny tranonkala fampitahana hafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampitahana vidin-javatra dia antony iray hafa amin'ny fanalàna ny tranonkala.
Raha te-hifanaraka amin'ny mpifaninana aminao ianao, dia mila manana fahafahana miditra amin'ny angon-drakitra izay vitsy dia vitsy monja no azon'izy ireo. Izany no mahatonga ireo orinasa sasany hanangana robots an'arivony amin'ny fitadiavana vaovao tsy dia fahita firy
Raha ny marina, raha manana fampahalalana bebe kokoa noho ny bokim-bokinao ianao, dia manome anao fifaninanana fifaninanana ho azy ireo. Ohatra, raha toa ny firenena A sy B, dia efa ho ela ny lalao baolina kitra, ary ny firenena A dia namely an'i B tamin'ny 80 isan-jaton'ny fihaonany ankapobeny, ny ankamaroan'ny bettors dia hametraka ny tsatòkany eo amin'ny firenena A. Raha toa kosa ny toerana ho an'ny lalao dia ao amin'ny Country B, ary ianao sy ny vitsivitsy ihany Ny mpilalao hafa dia nahita fa A mbola tsy nokapohiny B hatrany am-piandohan'ny farany, ianao dia hiditra amin'ny B, ary ny ankamaroan'ny mpandray anjara dia manohana ny firenena A dia hanome anao vola bebe kokoa aza raha mahazo fandresena. manana fahafahana misafidy kokoa mihoatra noho ny hafa ny tombony azonao.
Ny fitaovana fikarohana ao amin'ny tranonkala koa dia fitaovana fikarohana ilaina
Ny mpikaroka dia mampiasa ny tranokala ho an'ny asa ataony. Ny Universite, ONG, ary ny Governemanta koa dia mampiasa ny tranokala. Ny angon-drakitra sasany voafantina dia ilaina amin'ny tanjona sasany toy ny fanaraha-maso ny toetry ny Tany, fananganana fiara robots, ary na dia ny fananganana AI aza.
Ahoana no hanombohanao amin'ny fanindronana amin'ny tranonkala
Hatramin'ny dexi.io dia nanamboatra fitaovana fampiasana mora ampiasaina mora ampiasaina, afaka manomboka amin'ny fianarana fomba fampiasa ny fitaovana. Tena mahomby tokoa ny fanavaozana ny angona, ny fikolokoloana ny tranonkala, ary ny fanasitranana tranonkala. Na dia mila data aza ny milina dia misy ny dexi.io manampy amin'ny fanodinana ireo angona amin'ny milina.
Raha te hiditra amin'ny tranonkalanao voalohany ianao dia tokony hampiasa ny teny hoe fanodinana daty ivelany na fikarohana momba ny angon-drakitra mba hisorohana ny ambiguity. Ilainao koa ny manafoana ny faharanitan-tsaina ao ambadiky ny algorithm sy ny angona amin'ny taratasy. Ny tena zava-dehibe, satria ity no fotoana voalohany, tokony ho vonona ny tsy hahomby, hianatra avy amin'ny fahadisoanao ianao ary hanatsara. Ny fiandohananao voalohany, ny tsara kokoa.
Afaka mandroso ianao ary manandrana ilay fitaovana maimaim-poana. Mba hametrahana izany amin'ny endrika tsotra indrindra, ny robot iray manodina rakitra dia manao asa iray izay haka olona an'arivony maro ho vita Source .